Usuku: NgoJanuwari 17, 2020
I-Samsun Sivas Railway Railway Railway Trials iyaqhubeka
Irhuluneli u-Osman Kaymak utyelele isikhululo sikaloliwe saseSamsun watsho ukuba uloliwe weSamsun-Sivas uphantsi kovavanyo. Irhuluneli yaseSamsun u-Osman Kaymak utyelele isikhululo sikaloliwe saseSamsun kwaye wathi kuqhuba iinqwelomoya. [More ...]
İmamoğlu Yazisa umxholo weSitayile Istanbul Ileta eya kuEdodoan
Ukulandela ingxelo ye-EIA elungiselelwe uKanal Istanbul, Umongameli we-İBB u-Ekrem İmamoğlu wafaka isibheno kwi "European Side Reserve Area Area 1 / 100.000 Scale Environmental Change Change". Imamoglu, ngaphambi kwesibheno [More ...]
Ii-3 zeKomkhulu lisekwe kwiCandelo loMphathiswa Wezothutho
Ngeenguqulelo zoMthetho kaMongameli opapashwe kwiGazethi yaseburhulumenteni ngomhla we-17 kaJanuwari ka-2020, utshintsho olukhulu lwenzeka kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezothutho kunye neziSeko. Ngaphakathi kwiCandelo loMphathiswa wecandelo lezolimo, indlela, uloliwe kunye nezithuthi ezidityanisiweyo [More ...]
Turkey Wagon Industry Corporation (TÜVASAŞ) 20 abasebenzi ukugaya Continuous ukuba iziphumo draw izivumelwano ukusuka zicelo abafanelekileyo ukuthatha iimviwo yomlomo ngabaviwa kunye namaxwebhu ephambili kuluhlu amanene [More ...]
I-18 yePearl ye "Iintlanganiso eziQhelekileyo zeeNgqondo eziQhelekileyo" ezilungiselelwe ngokuthatha inxaxheba kweBursa Chamber yezoRhwebo noShishino (i-BTSO) ngokuthatha inxaxheba kwamagumbi kunye notshintshiselwano eBursa. Yenziwe kwi-znikâ €. U-BTSO Usihlalo weBhodi yaBalawuli u-Bur ° brahim Burkay uthe le nguqu ihamba kuqoqosho lwaseBursa. [More ...]
Imbali yomlando weKaraköy ivaliwe ngoJanuwari 19
I-Tunel yezeMbali, ethwala abakhweli phakathi kweKaraköy neByoyolu, iya kumisa iinqwelomoya nge-19 kaJanuwari ngenxa yokulungiswa nokulungiswa kwemisebenzi ukuze kubonelelwe ngenkonzo engcono eIstanbulites. Xa kuvaliwe umda wembali yomgaqo [More ...]
Isicwangciso seKonya sebhayisikile seKonya sifumana imbasa yeUNESCO
Isicwangciso seKonya Master, esatyikitywa okokuqala eTurkey nguMphathiswa Wezendalo nesiXeko, uMasipala wase Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir, wacwangciswa kwikomkhulu lekomkhulu leUNESCOâ € eParis. Yintoni eyayifanelekile ± deal ° dealkent Ã¼ - dÃ¼lÃ¼â €. Izixeko kunye nesiXeko [More ...]
Indibano ye-IMM linyathelo elibalulekileyo kwezothutho olukhululekileyo kubantwana abaneminyaka eyi-0 ukuya kwe-4 noonina
Elinye inyathelo elibalulekileyo elathatyathwa kukufezekiswa kwesithembiso sokufikelela ngokukhululekileyo kwisithuthi sikawonke-wonke esiya koomama abanabantwana abaneminyaka engama-0 ukuya kwengama-4, okuphakathi kwezithembiso zonyulo luka-Mongameli we-BBB u-Ekrem İmamoğlu. Kuxoxwe kwiseshoni yeNdibano ye-IMM izolo [More ...]
Kanal İstanbul Yamkelwe Ingxelo ye-EIA
Umphathiswa Wezemicimbi Yendalo kunye Nesebe leSixeko, uMurat Kurum, wathi bavavanya izichaso ngexesha le projekthi ye-Kanal Istanbul Project kwaye bayivume ingxelo ye-ED njenganamhlanje. Iziko linemibuzo ngokubhekisele kwiProjekthi yeKhanal Istanbul kunye nesikhundla sayo kwisakhiwo seNkonzo. [More ...]
IKartepe yoBusika boMthendeleko-Umtsalane weKarfest, iThemba lokuLinda kunye nokuKulinda
IKarfest, eza kubamba ezona zinto ziyonwabisa kunye nemiboniso eKartepe, idilesi yokhenketho lwasebusika, iya kubanjelwa eSisli Valley ngoMgqibelo, ngoJanuwari 18, phakathi kwe-14.00: 24.00- XNUMX. Ukudlala okungalibalekiyo dj, imiboniso ye-laser, umculo ophilayo, [More ...]
Ukucwangciswa kweholide yeSemester eKocaeli
Ukubonelela ngenkonzo yothutho phantsi konxibelelaniso lweKocaeli Metropolitan kaMasipala wezoThutho kunye neCandelo lezoLawulo lweTrafikhi, e-UlaÅŸÄ ± mPark, phakathi komhla we-18 kaFebruwari phakathi kowe-2 kaFebruwari nowesi-17 kuFebruwari ngenxa yeholide. Uhlaziyo lwenziwe [More ...]
Ukucocwa kwezothutho e-Ankara
UMasipala oMbaxa we-Ankara uyaqhubeka nemisebenzi yokucoca kunye nokubulala iintsholongwane kubahlali abasebenzisa izithuthi zikawonke-wonke eBaşkent ukuhamba kwindawo ecocekileyo. Iibhasi ngaphakathi kwe-EGO General Directorate zicocwa ngaphakathi nangaphandle kwaye zifafazwa. [More ...]
Ukubhaliswa kweRed Bull Homerun 2020 kuqalile
I-Red Bull Homerun, olona msitho wezemidlalo ubusika walo nyaka, ulungiselela ukuthatha ezona ndawo zibalulekileyo zokutyibilika eTeki. Ungabaleka kangakanani? Ungangxama ngokukhawuleza kangakanani? Kulungile, ninokuwenza nobabini kunye? [More ...]